ခန်းမစီစဉ်သူများထံမှတောင်းဆိုမှုများ | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (နောက်ပိုင်းတွင် "ဒီ site" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ဖောက်သည်များကဒီကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ သုံးစွဲမှုသမိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဤ site ၏အသုံးပြုမှုအဆင့်အတန်းကိုနားလည်ခြင်းစသည်တို့ကို cookies နှင့် tags များကဲ့သို့သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ ။ "Agree" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်သင်သဘောတူသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကိုင်တွယ်နှင့်စပ်လျဉ်းOta Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။
Shimomaruko JAZZ ကလပ်
Ota ရပ်ကွက် JHS လေသံစုံတီးဝိုင်း
အသင်း၏တည်ထောင်သူရုပ်ရှင်၏ (၃၀) နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား "ကျွန်ုပ်သည်စင်မြင့်ကြီးကိုရောက်နေပြီ!"
Magome Writers' Village Fantasy Theatre ပွဲတော်
ကောင်တာမှာ ၀ ယ်ပါ
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း Online လက်မှတ်
ဟောပြောပွဲ / အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Performance Kids Tokyo အတွက် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ ခေါ်ယူမှု။
Ryuko Memorial Hall "Wind Kaoru Museum Concert" လျှောက်လွှာပုံစံ
သတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" လွှမ်းခြုံတောင်းဆိုမှု / သတင်းအချက်အလက်ပေးအပ်
အုတာရပ်ကွက် ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ သတင်း အချက်အလက် စာတမ်း "ART bee HIVE" တရားဝင် PR Character မွေးဖွားခြင်း။
Magome Writers' Village Fantasy Theatre Festival DVD/ Goods Purchase Application
ပစ္စည်းများ download လုပ်ပါ
Ota ရပ်ကွက်ခန်းမ Aplico
သတိပေးချက်များ & ခေါင်းစဉ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ coronavirus တန်ပြန်မှုအသစ်များအကြောင်း
၄ အဆောက်အ ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း "သတိရအောက်မေ့ခန်းမ"
ပြပွဲ ဗီဒီယို မှတ်ချက်
Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမဆိုတာဘာလဲ။
Sanno Kusado သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Sanno Sosudo သတိရအောက်မေ့ခန်းမဆိုတာဘာလဲ
Shiro Ozaki သတိရအောက်မေ့ပြတိုက်
Ozaki Shiro သတိရအောက်မေ့ခန်းမဆိုတာဘာလဲ
Uguisu Net ဆိုတာဘာလဲ?
ဘတ်ဂျက် / လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ဘဏ္reportာရေးအစီရင်ခံစာ / လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ
Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှစီမံခန့်ခွဲသောစက်ရုံတစ်ရုံရှိလေဝင်လေထွက်စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံပါ
Ota Citizen's Plaza တွင်“ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒေသဆိုင်ရာဖန်တီးမှုဆု (ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး)” ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး / သတင်းအချက်အလက်စက္ကူ
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းသတင်းမဂ္ဂဇင်း "Art Menu"
"Art Menu" သတင်းမဂ္ဂဇင်းသည်ကြော်ငြာများအတွက်သတင်းအချက်အလက်
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE"
"ART bee HIVE" သတင်းအချက်အလက်စက္ကူကဘာလဲ။
"ART bee HIVE TV" စက္ကူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတီဗွီအစီအစဉ်နှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်
သတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" သည်ကြော်ငြာတင်သည့်နေရာတွင်ကြော်ငြာခဲ့သည်
XNUMX အဆောက်အ ဦး အဖြစ်အပျက်အချိန်ဇယား
တရားဝင် SNS ၏သတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဘာသာပြန်ထားသည်။စက်မှုဘာသာပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍>
ထို့အပြင်စက်ရုံကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ လုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်ခုစီမှချမှတ်ထားသောလမ်းညွှန်များကို ကိုးကား၍ Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်သင်၏နားလည်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းများမှကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များစာရင်း (ကက်ဘိနက်အတွင်းရေးမှူး ၀ က်ဘ်ဆိုက်)
Pre- ညှိနှိုင်းမှု / အစည်းအဝေး
ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်နှင့်စီစဉ်သူနှင့်စက်ရုံအကြားအခန်းကဏ္ the ခွဲဝေမှုကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ရက်ရက်ရောရောစီစဉ်ထားပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးအနားယူချိန်နှင့်ဝင်ပေါက် / ထွက်ချိန်ကိုအချိန်များစွာနှင့်သတ်မှတ်ပါ။
"ရောဂါပိုးထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်၏ ဖော်မြူလာမရှိသော ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပသည့်အခါ" Tokyo Metropolitan Emergency Measures and Infection Control Cooperation Fund Consultation Center မှ သတ်မှတ်ထားသော "စစ်ဆေးမှုစာရင်း" ကို ဖန်တီးပြီး ထုတ်ဝေပါ။ ကျေးဇူးပြု။စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက TEL: 03-5388-0567 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
ပွဲစသည့်အချိန်တွင် စစ်ဆေးရန်စာရင်း (Excel data)
ကျေးဇူးပြု၍ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာနှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်း၊ အသံဖြန့်ခြင်းကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပွဲစီစဉ်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဖျော်ဖြေမှုများအနေဖြင့်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့်ပိုမိုဂရုစိုက်ပါ။
* ရှေ့တန်းထိုင်ခုံများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း- လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ကိုးကားပြီး စင်မြင့်ရှေ့မှ လုံလောက်သောအကွာအဝေးကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။အသေးစိတ်အတွက် စက်ရုံကို ဆက်သွယ်ပါ။
ပွဲစီစဉ်သူနှင့် သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသမှုပုံစံအရ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများကြား လုံလောက်သောအချိန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ကူးစက်မှုမဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ကြည့်ပါ။
အဆိုတော်များ မှလွဲ၍ မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးစက်ရုံအတွင်းသင်၏လက်များကိုသေချာဆေးကြောပါ။
သတ်မှတ်ထားသည့်လူ ဦး ရေအလွယ်တကူထိတွေ့နိုင်သောနေရာများ၊ ဥပမာ၊ ဆေးထည့်ရန်စောင့်ဆိုင်းရသောအခန်းများနှင့်စောင့်ဆိုင်းခန်းများ၊ လက်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ပိုးသတ်ဆေးဖြေရှင်းနည်းကိုတပ်ဆင်ပြီးပုံမှန်ပိုးသတ်ဆေး။
ခန်းမအတွင်း စားသောက်ခြင်းအတွက် နေ့လယ်စာ စသည်တို့ကို အချိန်တိုအတွင်း တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် စားသောက်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေသည် (ခန်းမထိုင်ခုံများတွင် စားသောက်ခြင်း မပြုရ)။
ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကိရိယာများ၊ ကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်သူကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့အပြင်၊ အလေ့အကျင့်၊ အလေ့အကျင့်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊
အကယ်၍ သင်သည်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသည်ဟုသံသယရှိပါက၎င်းကိုဆေးရုံသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေးစခန်း၌ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါ။
ပွဲမလာရောက်မီ အပူချိန်တိုင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး ပွဲသို့လာရောက်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုမည့်ကိစ္စများကို ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ထိုအချိန်တွင် ပါဝင်သူများသည် တတ်နိုင်သမျှ ချို့ယွင်းချက်မရှိစေရန်နှင့် ရောဂါလက္ခဏာရှိသောသူများ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
သင်တန်းသားများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုင်းတာသည့်အပြင်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်အနေဖြင့်လည်းစီစဉ်သူသည်နေရာကို ၀ င်ရောက်သည့်အခါတိုင်းတာသင့်သည်။စီစဉ်သူကိုအပူချိန်တိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ (အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောသာမိုမီတာ၊ အပူစာပုံစသည်ဖြင့်) ပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုသည်။ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲပါက ကျေးဇူးပြု၍ စက်ရုံသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံမှန်အပူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောအဖျားရှိသည့်အခါသင့်တွင်အောက်ပါလက္ခဏာ (*) များ (သို့) အောက်ပါလက္ခဏာများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အိမ်၌စောင့်ဆိုင်းခြင်းကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြုလုပ်ပါ။
လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းပေါက်ခြင်းရောဂါ၊ အဆစ် / ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းစသည့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
အပြုသဘော PCR စမ်းသပ်မှုနှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အခါ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဝင်ပြီးနောက် စောင့်ကြည့်ကာလ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံ/ဒေသများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှု၊ နေထိုင်သူနှင့် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့မှု စသည်တို့။
* စံနမူနာမှာ "သာမန်အပူထက် အပူချိန်ပိုမြင့်လာသောအခါ" ၏ စံနမူနာမှာ ... အပူသည် ၃၇.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် အထက်ရှိသောအခါ၊
လူအဝင်အထွက်ကိုရှောင်ရှားရန်၊ အချိန်နောက်ကျခြင်းနှင့်အ ၀ င်အထွက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ conductors များလုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများခွဲဝေပေးခြင်းစသည်တို့ဖြင့်လုံလောက်သောအကွာအဝေးကိုထားပါ။
လက်မှတ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်သူများ၏အမည်နှင့်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။ထို့အပြင်၊ အချက်အလက်များကိုလိုအပ်ပါကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစင်တာများကဲ့သို့သောအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ပေးအပ်နိုင်သည်ဟုသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်အသိပေးပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူသည်ပါ ၀ င်သူများထံမှလာသည့်အခါဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ဆက်သွယ်ရန်အတည်ပြုချက်လျှောက်လွှာ (COCOA) ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုပါ။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သူ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများစသည်တို့အတွက်တန်ပြန်အစီအမံများကိုကြိုတင်စဉ်းစားပါ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုဗဟို ဦး စီးစနစ်အသုံးပြုခြင်းစသည့်စွမ်းဆောင်ရည်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုပါ။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရစည်းရုံးရေးမှူးသည်ပွဲစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သူများ၏အမည်များနှင့်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံ။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိခန့်မှန်းထားသင့်သည် (ခန့်မှန်းခြေတစ်လ) ။ထို့အပြင်အဖြစ်အပျက်တွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ပါ ၀ င်သူများအားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစင်တာများကဲ့သို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်ပါကကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားပါ။
အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်သည့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ (ဥပမာ - တွဲဖက်များအပါအ ၀ င်) အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်သတိထားပါ။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူတစ် ဦး ပေါ်ပေါက်သောအခါလူထုကြေငြာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုပေးပါ။
စီစဉ်ပေးသူသည်လက်သန့်ရှင်းဆေးကိုလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်လိုအပ်သည့်နေရာများ၌တပ်ဆင်သင့်ပြီးနေရာ၏ ၀ င်ထွက်ပေါက်မှထွက်ပေါက်မလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။
အဆက်အသွယ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ၀ င်ရောက်သည့်အချိန်တွင်လက်မှတ်ကိုရိုးရှင်းအောင်စဉ်းစားပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ မေးခွန်းလွှာများစသဖြင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးဖြန့်ဝေပေးပါ။ဒါ့အပြင်ရှောင်လွှဲလို့မရရင်လက်အိတ်ဝတ်ထားပါ။
ဖျော်ဖြေမှုအပြီးတွင်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေပွဲတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ပါဝင်သူများအကြားဆက်သွယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပါ ၀ င်သူများ၊ သက်ဆိုင်သည့်ပါတီများနှင့်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်နေရာများကိုကန့်သတ်ပါ။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရသင်တန်းသားများသည်ပွဲစဉ်အတွင်း၌ပင်မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်သင့်သည်။
အားလပ်ချိန်များနှင့် ၀ င်ထွက်ပေါက်များအတွင်းပိတ်ဆို့မှုကိုကာကွယ်ရန်အရေးယူပါ။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသံကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသံလွှင့်နိုင်သည့်သင်တန်းသားများရှိပါကစီစဉ်သူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
ဆက်စပ်ပါ ၀ င်သူများ (အထူးသဖြင့်အဆိုတော်များ) အကြားရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်းအစီအမံများ
ကျေးဇူးပြု၍ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်တိုးပွားစေသည့်ညွှန်ကြားချက်ကိုရှောင်ပါ (ရွှင်လန်းမှုကိုတောင်းခံခြင်း၊ ပါဝင်သူများအားစင်မြင့်ပေါ်သို့တက်စေခြင်း၊ မြင့်မားသောငါးမျှားခြင်းစသဖြင့်) ။
လမ်းပြရာတွင် ပါဝင်သူများကို လမ်းပြသည့်အခါ လုံလောက်သောနေရာနှင့် မျက်နှာဖုံးများ ဝတ်ဆင်ပါ။
ပါ ၀ င်သူများနှင့်ဆက်သွယ်သည့်ကောင်တာများ (ဖိတ်ကြားချက်, ည့်ခံ၊ တူညီသောနေ့လက်မှတ်လက်မှတ်များ) စသည်ဖြင့် acrylic boards နှင့်ပွင့်လင်းသောဗီနိုင်းကုလားကာများကဲ့သို့သောအခန်းကန့်များကိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တန်းသားများမှအကာအကွယ်ပေးပါ။
သင်တန်းသားများကို - သင်တန်းသားများကိုအကြားရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအမံ
ပရိသတ်ထိုင်ခုံများတွင်မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယင်းကိုမ ၀ တ်ဆင်ထားသူများကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်သေချာစွာသေချာစွာ ၀ တ်ဆင်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အားလပ်ချိန်များ၊ နေရာ၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်၊ ဝင်ပေါက် / ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများစသဖြင့်အားလပ်ချိန်များ၊
ကျေးဇူးပြုပြီးသူတို့ကိုအားလပ်ချိန်များတွင်စကားပြောခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ၀ င်ထွက်ရန်ထွက်ခွာရန်ပြောရန်နှင့်သူတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် lob ည့်ခန်းမအတွင်းအကွာအဝေးအဝေးတွင်သာနေရန်အားပေးပါ။
အားလပ်ချိန်တွင် သန့်စင်ခန်းများတွင် ဧည့်ခန်း၏ အရွယ်အစားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လုံလောက်သောနေရာနှင့် စီစဉ်မှုကို အားပေးပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ၀ င်ခွင့်မပြီးမီနှင့်အပြီးသင့်အစားအစာကိုတတ်နိုင်သမျှပြီးအောင်လုပ်ပါ။
အဆောက်အဦကို ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အခန်းထဲတွင် စားသောက်နိုင်သော်လည်း အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုပါ။
အသုံးပြုသူများအကြား chopsticks နှင့်ပြားမျှဝေရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြည့်စုံပါက ၀ င်ခွင့်နှင့်အစီအစဉ်ကိုလိုအပ်ပါကကန့်သတ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းများသည် နှာခေါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင် လိုအပ်သလို လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
အမှိုက်သရိုက်များကိုသန့်ရှင်းပြီးစွန့်ပစ်သော ၀ န်ထမ်းများအတွက်မျက်နှာဖုံးများနှင့်လက်အိတ်များကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။
ပါ ၀ င်သူများက၎င်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရန်စုဆောင်းထားသောအမှိုက်သရိုက်များကိုသေချာစွာစီမံပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားသောအမှိုက်သရိုက်များကိုသင်နှင့်အတူယူပါ။ (စက်ရုံတွင်ငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်နိုင်သည်။ )